Dian-tongotra sy famantarana famantarana ny biby | Simbolo sy dikany - Hevitry Ny Tandindona
Dian-tongotra sy ny famantarana ny dian-tongotra
Ny ara-panahy amerikana zanatany dia nifantoka betsaka tamin'ny fifandraisan'ny tsirairay sy ny foko amin'ny natiora.
Araka izany, ny Indiana Amerikanina dia nandinika an'izao tontolo izao nitady famantarana, marika ary fambara misy dikany amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny rivotra ka hatramin'ny fitadiavana ireo lalan'ny biby.
Ireo tandindona ireo matetika dia nanjary ampahany amin'ny akanjo amin'ny fanantenana hitondra herin'ny biby manokana amin'ny haza hazandrano, mandritra ny dia na amin'ny asa rehetra izay tsy afaka handratra majika fanampiny fanampiny.
Ny dian-tongotra amin'ny biby amin'ny ankapobeny dia midika fa misy karazana hafatra avy amin'ny tontolon'ny fanahy. Ny shamans dia nandika ny dian-biby koa ho famantarana sy fambara amin'ny zavatra ho avy.
Mikorisa ambany hianaranao ny dikany ara-panahy an'ny lalan'ny biby tsirairay. Aza hadino ny miverina mijery satria misy dian-tongotra biby vaovao sy mombamomba ny mombamomba ny làlan-kaleha nampiana tsy tapaka!
*** Fanamarihana manokana *** Rehefa mandika ny dikan'ny làlan'ny biby amerikana zanatany dia zava-dehibe ny handinihana izay Toro-lalana kardinaly mandeha ny lalana. Amin'ny fahafantarana ny dikany an'ohatra ny Avaratra, Atsimo, Atsinanana ary Andrefana dia azonao atao ny mandika tsara kokoa ireo hafatra avy amin'ny Fanahy.
Badger Tracks Hevitra & Famantarana
Mahery ny tandindona Badger sy ny dikany. Mampianatra antsika ireo zavaboary kely ireo fa ny haben'ny fanahinao no zava-dehibe.
Tena mahery setra sy matanjaka ny badger raha ny amin'ny fiarovana ny habaka misy azy ireo, ka raha misy olona tafihoatra tato ho ato dia ampiasao ny fahefana Badger hanamarihana mafy ny faritaninao.
Ny làlan'ny badger dia maneho ny famoronana. Raha manatona anao ireo dian-biby ireo dia fampahatsiahivana ny fampiasana ny toetranao mamorona mba hamakivakiana ilay toe-javatra hitanao fa misy anao.
Rehefa mahita ny làlan'ny Badger ianao dia mety ho fambara fa izao no fotoana tokony haharetana hahatratra ny tanjonao satria Badgers mijanona na inona na inona mba hahazoana izay tadiaviny. Ireo olona mahita fa sarotra ny mamita tetikasa dia matetika aseho amin'ny làlan'ny Badger ho fampahatsiahivana ny fiantsoana ny toetra maditra Badger hanampy azy ireo hahomby.
Ary farany, ny fitadiavana ny làlan'ny Badger dia mety hanondro fotoana iray amin'ny fiainanao izay ilana andraikitra. Mety hahatonga anao tsy hahazo aina kely io, fa eo i Badger hanampy anao handalo azy io amin'ny fomba feno fahefana.
Ny dikan'ny Bear Track sy ny famantarana azy
Satria ny tandindona sy ny dikany dia maneho hery, fiarovana ary fisaintsainana mahita ny dian'i Bear dia mety hilaza aminao hanatsara ny lalao ao an-trano. Arovy izay ary iza no tianao toy ny mama Bear. Mikolokolo inona ary iza no tianao toy ny mama Bear.
inona ny retrograde ananantsika ankehitriny
Mampahatsiahy antsika koa ny fahitana zana-tohatra fa mila 'fotoana lava-bato' ny tsirairay - toerana milamina ahafahanao mamory indray sy mampiditra ny zava-mitranga amin'ny fiainanao. Tena marina izany raha nandalo tadio ny hetsika tato ho ato ianao.
Ny hibernation dia endrika fisaintsainana sy fotoana ahafahantsika mifandray amin'ireo fiaramanidina astral mandritra ny fotoana nofinofy. Mety hisy fiovana lehibe miandry anao amin'ny fanarahana ity hafatra ity.
Na dia mahatsiaro tena ho tia tena aza ny olona sasany, dia tadidio fa rehefa mivoaka avy ao anaty lava-bato ianao dia karazana fahaterahana indray. Ary tsy afaka manao izay fara herintsika amin'ny fikarakarana ny hafa isika raha tsy hoe mikarakara ny tenantsika aloha, sa tsy izany? Tsy misy lasopy avy amin'ny vilany tsy misy.
Ny bera koa dia biby filalaovana izay hanao zavatra rehetra hametrahana ny tongotr'izy ireo amin'ny sakafo mamy. Ny fahitana ny dian-dian'i Bear dia mety ho famantarana fa fotoana izao handefasanao, hiala voly ary hihinana ny efitra foana ianao!
Bobcat Tracks Hevitra & Famantarana
Marina amin'ireo tandindon'ny saka sy dikany rehetra, ny fifandanjana, ny faharetana, ny halatra ary ny fifantohana dia ireo hafatra ara-panahy nalefa taminao rehefa sendra lalana Bobcat ianao.
Biby avonavona noeritreretina, i Bobcats dia mazàna ho zavaboary mitokana kokoa ka ny fahitana ny làlan'i Bobcat dia mety ho famantarana fa miantso ny 'fotoana tokana' ny fanahinao.
Ny fotoana irery dia manome antsika fotoana hanakatonana ireo fanakorontanana eo amin'izao tontolo izao ary hifantoka amin'izay tena zava-dehibe amin'ny saintsika, ny vatantsika ary ny fanahintsika.
Ny fahitana ny làlan'i Bobcat dia mety ho marika fa tonga ny fotoana hifantohanao amin'izay tena tadiavinao amin'ny fiainana, handrafetana ny 'fanafihanao' ary hifindra amin'ny fahatokisan-tena azo antoka amin'ny tanjonao.
Tsy maninona ny haben'ny saka, izy ireo dia anisan'ny zavaboary be filalaovana indrindra ka mety nipoitra teny amin'ny lalanao ny lalan'i Bobcat hampahatsiahy anao fa ny fihomehezana dia iray amin'ireo mpitsabo tsara indrindra.
Coyote Tracks Hevitra & Famantarana
toerana misy an'i jupiter ao amin'ny rafi-masoandro
Ny tandindona sy ny dikany coyote dia faritana indrindra amin'ny fampiasana ny teny hoe 'trickster' sy 'formeshifter'. Noho izany, ny fahitana ny lalan'ny Coyote dia famantarana mahery hipetrahana ary hijerena izay fiheverana noforoninao ho an'ny hafa sy ho anao.
Satria ny Coyote no prankster farany, mety hampihomehy ny ohatry ny zavaboary ity. Saingy misy lafiny maizina kokoa amin'ny angovo ahafahantsika ho lasa mahay be amin'ny famitahana, dia mamita-tena amin'ny farany.
Ny coyotes koa dia be mpitia. Toa tsy afa-po mihitsy izy ireo. Ny lalan'ny Coyote dia mety ho famantarana fa izao no fotoana handinihana ny fiainanao (fianakavianao, namanao, asanao, sns.) Ary hahitanao izay ilainao 'mihinana' mba hahatsapanao ho 'feno'. Malahelo anao ve ny tena fitiavana, ny tena fisakaizana, ny asa feno, sns. Raha izany dia inona avy ireo dingana tokony hataonao hiantsoana ireo fifandraisana ireo eo amin'ny tontolonao ka hameno ny toerana banga ao am-ponao?
Deer Tracks Hevitra & Famantarana
Ny tandindon'ny serfa sy ny dikany dia misy fahasoavana, hakantony, fahavokarana, fahavokarana ary fahafoizan-tena. Ireny zavaboary malefaka ireny dia iray amin'ireo angovo lalindalina kokoa amin'ny marika amerikana zanatany.
Nandritra ny taonjato maro, ny Amerikanina tera-tany dia nanara-dia ny diera tsy ho sakafo fotsiny fa noho ny Deer dia mitarika azy ireo hatrany amin'ny fambolena ahitra tsara indrindra. Amin'izany dia omena voninahitra ny diera noho ny fahalalahan-tànany amin'ny fampifandraisana antsika amin'ny fanomezana tsara indrindra natolotry ny Reny Tany ary ny fahafoizan-tenany hanome ny hena ilaina ho an'ny fivelomana.
Ny fahitana ny làlan'ny Deer miseho voajanahary dia fambara tena tsara izay arovanao ary tsy mila na dia mahatsiravina aza ny tarehin-javatra misy anao. Raha narary ianao dia afaka maneho ny fiverenan'ny fahasalamana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ihany koa ny lalan'ny diera.
Ny dian-diera noforonin'ireo Teratany Amerikanina dia natao hanondroana ny hafa fa be dia be ny fihazana. Ankoatr'izay dia nampiasa ny làlan'ity biby ity izy ireo mba hitarika ny lalana mankany amin'ny toeram-pialofana sy sakafo azo antoka.
Satria i Deer dia mihetsika amina fahamendrehana sy fahakingana tsy mampino toy izany, ny fahitana ny dian-tongotra Deer dia mety ho famantarana fa izao no fotoana tokony hijerena ny fomba fivezivezena amin'ny fiainanao manokana. Raha tafintohina ianao, inona avy ireo dingana tokony hataonao mba hahafahanao mihetsika amin'ny andriana Deer?
Ny làlan'ny alika dia midika sy famantarana
Tandindona sy dikany ny alika, mazava ho azy, rehetra dia momba ny tsy fivadihana sy ny fitiavana tsy misy fetrany. Ny fitsidihana alika alika dia mampatsiahy moramora antsika hanome voninahitra ny 'fifandraisantsika rehetra.'
Ny alika dia manompo ny olona tsy misy fitsarana, manome fanoloran-tena sy fangorahana na dia ireo izay nahatonga azy ireo nandratra aza indraindray. Amin'ity, rehefa fantatsika fa ny làlan'ny alika dia noforonin'ny alika, dia mety ho fambara iray izay izao no fotoana 'mamela heloka sy manadino'.
Na dia tsy manantena antsika 'hihodina' fotsiny aza ny fanahin'ny alika dia manontany raha toa ka mendrika tanteraka ny fahafaham-baraka nataonao tamin'olona na toe-javatra iray. Atsofohy ary alao ny sary lehibe.
Fox Tracks Hevitra & Famantarana
Ny tandindona sy ny dikany dia tsy mitovy amin'ny olona manerantany. Amin'ny kolontsaina sasany dia fambara mahatalanjona izy io ary, amin'ny hafa, dia tandindon'ny fahafatesana.
Na izany aza, ny dikany eken'ny besinimaro an'ny Fox dia mifototra amin'ny fanoloran-tenan'ilay biby ho an'ny fianakaviana, ny fahaizany mihaza maranitra amin'ny laser ary ny vazivazy tsy azo ivalozana.
Amin'izany, ny fahitana ny lalan'ny Fox dia afaka manondro fa ny fifantohanao dia tokony ho an'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Mety misy ny interlopers mandrehitra izay (mahatsiaro tena na tsy mahatsiaro tena) izay mitondra fiara eo anelanelan'ny olona amin'ny alàlan'ny fitaka. Izao no fotoana hiverenana any an-davaka ary hijerena ny fihetsiky ny fianakavianao. Tadiavo ny loharanon'ny fihenjanana sy ny hatezerana ary atombohy ny fanadiovana trano.
Rehefa eo am-pamandrihana ny amboadia dia mihodina 'mahitsy toy ny zana-tsipìka' ny vatany ka ny fahitana ny dian'i Fox dia azo antoka fa famantarana fa izao no fotoana tokony hifantohanao tsy mbola nisy toy izany. Mikendry mivantana ny zavatra tadiavinao ary avelao ny zana-tsipiky ny fikasanao hisidina mahitsy sy marina.
Ary farany, ny fahitana ny lalan'ny Fox dia fampahatsiahivana fa ny fihomehezana no fanafody tsara indrindra ka hamaivanina sy hahitanao ny fifaliana eo afovoanao!
Ny làlan'ny totozy dia dikany sy famantarana
Ny tandindona sy ny dikany amin'ny totozy dia miompana amin'ny hakingan-tsaina, fahaizan-tsaina haingana, fahazotoana ary fitehirizana.
Ka, rehefa sendra ny làlan'ny Mouse isika, dia mpanao harbinger fa izao no fotoana tokony hahitana saina be, mieritrereta haingana, mihetsika haingana ary mitahiry ny zava-drehetra satria ho sarobidy amintsika izany amin'ny fotoana manaraka.
Ho an'ny Sinoa, totozy hajaina toy ny manana kinga amin'ny raharaham-barotra goavambe ary, noho izany, dia anisan'ireo manambina indrindra satria mety ho mpanankarena.
Ny mahita Mouse Tracks dia azo antoka fa hafatra avy aminao mpitarika fanahy fanahy fa ny raharaham-barotra noeritreretinao dia hahomby.
dia capricorn mifanaraka amin'ny capricorn hafa
Famantarana sy famaritana ny lalan'ny Opossum
Ny tandindon'ny Opossum sy ny dikany dia mety ho sarotra. Aleo atrehana, fa tsy dia mampametraka firy ireo biby ireo. Fa ny Opossums dia zavaboary manan-tsaina, haingana ary masiaka be.
Rehefa sendra ny lalan'ny Opossum ianao dia mitantara tantara iray lehibe izy ireo. Ny lalana Opossum dia mangataka anao hitandrina ny fihetsika Opossum mba hahafahanao miantso azy raha ilaina indrindra.
Midira ao amin'ny angovo Opossum ary ampiasao ny toetranao hafetsena ary mahaiza mifantoka - indrindra rehefa miatrika fahavalo.
Raha milaza aminao ny intuition-nao fa tsy hiasa dia makà tondro avy amin'ny Opossum - milalaova maty mandra-pahatongan'ilay mpanakorontana mihevitra fa tsy misy sary ianao. Raha mandany fotoana ianao, manaova drafitra vaovao amin'ny famahana ny olanao.
fampifanarahana lahy sy vavy vavy ary aquarius
fampifangaroana ny lehilahy sy ny scorpio vehivavy aquarius
inona no famantarana fa venus izao?
sari-tany amin'ny maridrefy